Narso - Gpedia, Your Encyclopedia
Narso (Af Ingiriis : bass drum; Af carabi: الطبل الكبير) waa nooc ka mid ah durbaanka kaasi oo leh labo dhinac oo laga garaaco. Narsadu waxay kaga duwan tahay durbaanka waa qaabka ay u sameeysan tahay. Halka durbaanku inta ugu badan ka leeyahay hal dhinac oo laga garaaco si uu cod u sameeyo, narsadu waxay leedahay labo dhinac oo isku mar la garaaci karo. Sidoo kale narsadu waxay sameeysaa shanqadh ka fudud kan durmaanku sameeyo.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Narso&oldid=200117"